Saaxiibada caalamka oo soo dhoweeyay doorashada habsamida u dhacday ee madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka HirShabeelle, Maxamed Cabdi Waare | UNSOM
21:02 - 17 Dec
Saaxiibada caalamka oo soo dhoweeyay doorashada habsamida u dhacday ee madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka HirShabeelle, Maxamed Cabdi Waare
Qaramada Midoobay, Midowga Afrika, Midowga Yurub, Urur-Goboleedka IGAD, Dowladaha Ethiopia, Talyaaniga, Sweden, Boqortooyada Midowday ee Ingiriiska iyo Maraykanka ayaa u hambalyeeyay Maxamed Cabdi Waare oo Madaxweynaha HirShabeelle loogu doortay codeyn shalay ka dhacday golaha baarlamaanka dowlad goboleedka HirShabeelle.
Codeyntu waxay u dhacday si furan oo habsami ah. Saaxiibada caalamku waxay soo dhoweynayaan sida habsamida ah ee loo qabtay doorashada iyadoo la raacayo hanaanka sharci ee u degsan. Waxayna ugu baaqayaan dhammaan dhinacyada inay ixtiraamaan natiijada doorashada ka dhacday golaha baarlamaanka dowlad goboleedka ayna ka fogaadaan wax alla wixii fal ah oo wax u dhimmi kara xoojinta hanaanka maamul dhisidda.
 Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud u qaabilsan Soomaaliya Warbixinta Golaha Amaanka ee Soomaaliya
 Muqdisho oo lagu qabanayo bandhigga seddaxaad ee buugagta
Saaxiibada Soomaaliya ee Caalamka oo ka Walaacsan Dhacdooyinkii Dhowaan ka Dhacay Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed
Muqdisho – Saaxiibada Caalamka ee kala ah * (hoos ku qoran) waxay ka walaacsanyihiin dhacdooyinkii dhowaan ka dhacay Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed.
Muqdisho – Xilli adduunka laga xusayay Maalinta Caalamiga ah ee La Dagaallanka Musuqmaasuqa, Dowlada Federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday tallaabooyin qorshaysan oo lagu xoojinayo ballanqaadka ay sameysay ee ay kula dagaallameyso musuqmaasuqa kuna xoojineyso daahfur